सडक बिगारियो तर मर्मत भएन – News Portal
April 4, 2019 epradeshLeaveaComment on सडक बिगारियो तर मर्मत भएन
तुलसीपुर, २१ चैत । तुलसीपुर उमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित ‘ङ’ लाईनमा खानेपानीको पाइप मर्मतका लागि खनिएको सडक तत्काल मर्मत गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।
केही दिन अघि ‘ङ’ लाईनमा बिग्रिएको खानेपानीको पाईप मर्मतका लागि खनिएको सडक मर्मत नभएपछि स्थानीयले मर्मत गरेर पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले सडक मर्मत नहुँदा पूरै लाइन धुलाम्य भएको र सडकमा हिड्दासमेत समस्या हुन थालेको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
स्थानीयले सडक मर्मत नहुँदा सडक धुलाम्य भएको बताएका छन् । स्थानीय पदम केसीले भने–खानेपानीको बिग्रिएको पाईप मर्मतका लागि खनिएको सडक लामो समयसम्म पनि पक्की हुन सडकको छैन् ।
अहिले सबै ब्यवसाय धुलोले छोपेको छ । ‘खानेपानी संस्थाले बनाउने हो की, कसले बनाउने हो तत्काल सडक मर्मत गर्नुपर्छ ? सडक पहिलेकै अवस्थामा आउनु पर्छ’ उनले भने ।
‘सडक खाल्डाखुल्डी धुलाम्य हुँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको स्थानीय बसन्त केसीले बताए । हाम्रा ब्यवसाय धुलोले चौपट बनाइसकेको छ’ उनले भने ‘जसले खन्यो उसले मर्मत गर्नुपर्ने हो तर खनियो त्यतिकै छोडेर गइयो यो कस्तो विकास हो ?
सडक बिगारेपछि मर्मत गरेर पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । तुलसीपुर खानेपानी तथा उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले खानेपानी मर्र्मत तथा पाईप विस्तार गरिसकेपछि सडक पुनः मर्मत भएको छैन्, सडक मर्मत नहुँदा सडक धुलाम्य भएको छ केसीले भने ।
संस्थाले खानेपानीको पाईप मर्मतका लागि सडक खन्यो, तर पूर्ववत अवस्थामा नल्याउँदा सडकमा धुलो उड्न थालेको छ, जसले गर्दा स्थानीयलाई सास्ती भएको छ, उनले भने, सडक धुलाम्य हुँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको छ, व्यापार व्यवसाय सारा सबै धुलाम्य छ ।
पाईप मर्मतका लागि खनिएको सडक कसले मर्मत गर्ने हो, अहिलेसम्म मर्मत हुन सकेको छैन्, हामीलाई धुलो सताउन थालेको छ, व्यापार, व्यवसाय चौपट्ट भएको छ, बिगारेपछि बनाउन जान्नुपर्ने हो– उनले भने ‘काम गर्न कालोपत्रे उप्काइन्छ तर मर्मत हुँदैन्, सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता सरसफाईका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानीको समस्या भएकाले मर्मत गरिएको तर बजेट अभावका कारण सडक कालोपत्रे गर्न नसकिएको बताए । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर खानेपानीले काम गरिरहेको बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष विरेन्द्रकुमार शाहले खानेपानीले जथाभावी सडक खन्ने र मर्मत नगर्न गरेको गुनासो वडामा आइरहेको बताए । उनी पाइप लाइन विस्तार र मर्मतका लागि सडक खन्ने बेला स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नभएको बताए । हामीसँग समन्वय नभएर काम हुन्छ, त्यो कामले आफूहरुसँग कुनै सहमति नभएको बताए । अध्यक्ष शाहले भने बिगार्नेले सपार्नु जान्नुपर्छ ।
तुलसीपुरमा नेपाल बैंकको शाखा
बेकामे ओली सरकारः देउवा
विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति
तुलसीपुर उपमहानगरपालिको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम
June 20, 2020 epradesh
बैंक सञ्चालकसहित ५६ जनामाथि मुद्दा
October 21, 2019 epradesh